Posted by Villager at 1:14:00 AM
UNICEF တာဝန်နဲ့ ငဖဲမြို့ကို ရောက်ခဲ့တုန်းက မြိုခံတွေ လုက်ပို့ပေးလို့ မန်းရွှေစက်တော်ကို ပွဲတော်ချိန် မဟုတ်ပေမဲ့ ရောက်ခဲ့ဖူးခဲ့ ရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတာ့ ဆိုင်ကယ်စီးရ လွယ်အောင် ဘောင်းဘီတို ၀တ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် လမ်းတစ်လျှောက်က ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေ ရိုက်ချက်နဲ့ ခြေထောက်မှာ အရှိုးရာ အထပ်ထပ်ပေါ့။ အောက်စက်တော်ရာက ပွဲတော်ချိန် မဟုတ်တော့ ပိတ်ထားတယ်ဗျ။ အထက် စက်တော်ရာမှာ အမျိုးတွေနဲ့ အစာကျွေးရင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးတယ်။ ရေမကူးတတ်တဲ့ ကျွန်တော် ရေချိုးဆင်း တာတော့ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးလေ။ အ၀တ်လဲစရာ နေရာ မရှိတာလဲ ပါတာပေါ့။ ယူလာတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားသောက်ပြီး ခဏတဖြုတ်နား ဓါတ်ပုံတွေရိုက် ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြန်လမ်းကိုတော့ မြို့ဘက်ကနေ ပတ်ပြန်ပေးလို့ နောက်ထပ် အရှိုးရာတွေ ထပ်မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငဇဲမြို့လေးကို မန်းရွှေစက်တော်နဲ့ အတူ ဘ၀မှာ အမှတ်တရ ရှိနေဆဲပါ။
ဒီလိုတင်ပေးလို့ သန့်ခရု ပါ ကိုရွာသား
ပြောသာ ပြောရသာ ရွေစက်တော်ကို ကျွန်မ တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဘူးသေးဘူး။
ဒီလိုပဲ ပုံတွေ ကြည့်ကြည့်နေရတာ။
တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်အောင်သွားဦးမယ် ။
ဘယ်တော့ အချိန်မှန်းမသိတော့ တစ်ချိန်ချိန်ပေါ့။
ပို့စ်ပြန်တင်လို့ ၀မ်းသာပါတယ် ။
စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။ အမြဲတမ်း ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေနော်
တိုက်ဆိုင်လွန်းစွာပဲေ၇ွှစက်တော်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ၀ါကျင်နေတဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးကို ဒီနေ့ ထုတ်ကြည့်မိတဲ့နေ့..
နောက်ပြီး ငယ်ငယ်က ချောင်းထဲရေဆင်းကူးခဲ့တာ ပိုလွမ်းသွားတယ်ရှင်။
လေးခါရောက်ဖူးတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ရိုးမသွားဘူး။ လမ်းမှာ ဖုန်တထောင်းထောင်းနဲ့မို့ ရွှေစက်တော်ရောက်ရင် လူတွေလဲ မျောက်ဖြူတွေနဲ့ တူရောပဲ။ ရောက်လို့ ကားပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ တခါတည်း ချောင်းထဲ ဆင်းဆော့ခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်ဗျ။ တချိန်ချိန်တော့ ထပ်ေ၇ာက်ဖြစ်အုံးမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ ဆိုတော့ ရောက်ခဲ့ဖူးတာကို ပြန် လွမ်းလာသလိုပဲ။ ရေချိုးတုန်း ဆပ်ပြာမျောသွားလို့ အသည်းအသန် လက်ပစ်ကူးပြီး လိုက်ကောက်ရတာကိုလည်း လွမ်းမိတယ်ဗျာ။
Villager ရေ အစ်မ ညခင်း မန်းရွှေစက်တော်ကို ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဘဲရောက်ခဲ့ပါတယ်…အမတန်ကြည်ညိုစရာ…ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ခရီး စဉ်လေးပါ…ညခင်းလဲ မန်းရွှေစက်တော်အကြောင်းရေးထားပါတယ်…ဒီ စာမျက်နှာကိုရောက်တော့…နောင်နှစ်မှာထပ်မံဖူးမျော်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်မိပါတယ်…ဆက်လက်ရေး သားနိုင်ပါစေ…
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးဗျာ. ဗဟုသုတ တော်တော်ရစေတယ်. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်သွားသလိုပဲ. ဒါမျိုးလေးတွေ ထပ်တင်လို့ကတော့ ထပ်ဖတ်ဦးမယ်ဗျာ. ကြိမ်းသွားပြီနော်. တင်သာတင်ပေတော့ဗျို့.. :)
ကျွန်တော်လည်း ရွှေစက်တော်ဘုရားသွားတဲ့အကြောင်းရေးပြီးမှ ဓါတ်ပုံရှာရင်း ဒီမှာအများဆုံးတွေ့တာမို့ ဒီကို ညွှန်းပါရစေ